सुन्दरीहरुलाई सित्तैमा खाना खुवाउने रेष्टुरेन्ट ! « Mazzako Online
सुन्दरीहरुलाई सित्तैमा खाना खुवाउने रेष्टुरेन्ट !
माघ ४ गते, काठमाण्डौं
चीनमा एउटा यस्तो रेष्टुरेन्ट छ । जहाँ सुन्दर युवती र हेन्डसम केटाहरुलाई निःशुल्क खाना सर्भ गरिन्छ । यस्तो नियम संसारको अर्को कुनै रेष्टुरेन्टमा छैन । यद्यपी चीनमा यसअघि पनि केही रेष्टुरेन्टहरुले यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
चीनको हेनान प्रान्तको झेङ्गझोऊ स्थित कोरियन रेष्टुरेन्टले यस्तो अनौठो अभ्यास गरेको हो । यद्यपी कुन ग्राहकको शारीरिक बनौट राम्रो छ भन्ने कुराको निक्र्यौल रेष्टुरेन्टका कर्मचारीले गर्दैनन् । एउटा कष्मेटिक सर्जरी क्लिनिकका कर्मचारीले ग्राहक मध्येबाट सुन्दर र हेन्डसम ग्राहकलाई छनौट गर्छन् । रेष्टुरेन्टले यस्ता ग्राहकलाई निःशुल्क खाना खुवाउछ ।
रेष्टुरेन्टमा आउने ग्राहकहरुको फोटो खिचिन्छ । त्यसपछि कष्मेटिक सर्जरी क्लिनिकका कर्मचारीले यि फोटो मध्येबाट पाँचजना सुुन्दर ग्राहकको फोटो छनौट गर्छन् । छनौटमा परेका ग्राहकहरुले खाएको खानाको पैसा रेष्टुरेन्टले मिनाहा गरिदिन्छ ।
कोरियन रेष्टुरेन्ट जेजुले होटलको प्रोमोशनका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । होटलको यस्तो कार्यक्रमको समर्थन र बिरोधमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् ।
सुन्दरहरुलाई सुविधा दिने नाममा रेष्टुरेन्टले सुन्दरको सुचीमा नपरेकाहरुप्रति अन्याय गरेको तथा उनीहरुको रुपरंगको खिल्ली उडाएको आरोप रेष्टुरेन्टमाथी लागिरहेको छ ।
जेजु रेष्टुरेन्टले फेब्रुअरीको मध्यसम्म यो कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ ।